ထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ်များ အန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် testing ကဏ္ဍသည် လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုမှပြောကြား
ထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ်များ အန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် testing ကဏ္ဍသည် လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုက SC Auto Myanmar Co.,Ltd. ၏ SC NEUSTAR ဘက်စ်ကား ထုတ်လုပ်ရေးကို သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် ၂၀၁၉ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်ရှိ SC Auto (Myanmar) Co.,Ltd. ၏ SC NEUSTAR ဘက်စ်ကား ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံကို သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ယာဉ်များ အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် testing ကဏ္ဍသည်လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်း၊ ထို့အပြင် CKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်နေခြင်းကြောင့် အရေအတွက်များများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနိုင်မှသာ တွက်ချေကိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရောင်းချပြီးကားများကိုလည်း after sale service လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ရရှိရေးအတွက်လည်း သင်တန်းများပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မော်တော်ယာဉ်များကို ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကနဦးထုတ်လုပ်သည့် model အလိုက် အစီး ၁၀၀ ကို စစ်ဆေးပြီး certificate of approval (COA) ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ရှောင်တခင် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
SC Auto Myanmar မှ SC bus ကားများအတွက် ဘတ်စ်ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများကို ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ကာ CKD စနစ်ဖြင့် နှစ်စဉ် မော်တော်ယာဉ်စီးရေ ၆၀၀ ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် လာအိုနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။